Akwalite ngwa ngwa nke asambodo ahụike dijitalụ njem ikuku
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Akwalite ngwa ngwa nke asambodo ahụike dijitalụ njem ikuku
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụgbọ elu na mba ebugala asambodo na ngwa dijitalụ ahụike dijitalụ, ngwa ngwa ịnabata ngwa ndị a ejirila nwayọ na enweghị nha.
Ụgbọ elu azụmahịa amalitela ogologo, nwayọ na-arịgo site na njem njem nke ọrịa COVID-19 mepụtara.
Industrylọ ọrụ ụgbọ elu chọrọ akụrụngwa dijitalụ echekwara nke ọma nke na-enyere ndị njem aka bulite ma buru ọnọdụ ọgwụ mgbochi ha, nsonaazụ ule ọhụrụ ma ọ bụ ọnọdụ mgbake COVID-19.
Ka njem na -ebilite, ndị ọrụ ụgbọ elu, ndị ọrụ nchekwa na mbata na ọpụpụ na ndị na -ahụ maka njikwa ókèala nwere ike zute ọtụtụ ule na akwụkwọ ọgwụ iji hazie.
Foundation Safety Foundation taa kpọrọ oku maka ụlọ ọrụ ụgbọ elu, ndị na -ahụ maka njikwa na ndị isi ahụike gburugburu ụwa ka ha mee ngwangwa mmepe nke asambodo ahụike dijitalụ nke ụwa nabatara yana ka ebuga ha ebe niile n'ime ọnwa iri na abụọ sochirinụ.
“Ụgbọ elu azụmaahịa amalitela ogologo, nwayọ ịrịgo na njem njem nke ọrịa COVID-19 mepụtara, mana ọbụlagodi njem mba ofesi na-ejupụta n'ọgba aghara na nkụda mmụọ gbasara akwụkwọ a na-anabata, ihe nnwale chọrọ na onye na-ahụ maka iche iche, echegbula. ihe egwu nke nsonaazụ nnwale COVID adịgboroja ma ọ bụ wayo ọkwa ọgwụ mgbochi, ”Onye isi ala na onye isi oche Dr. Hassan Shahidi kwuru. "Iji bulie nchekwa ahụike ndị njem, anyị chọrọ ngwaọrụ dijitalụ echekwara nke ọma nke na-enyere ndị njem aka ibugo na buru ọnọdụ ọgwụ mgbochi ha, nsonaazụ nnwale ọhụrụ ma ọ bụ ọnọdụ mgbake COVID-19, nke ahụ ga-amata ma nabata ebe ọ bụla ha na-aga," o kwuru.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụgbọ elu na mba ebugala asambodo ahụike dijitalụ na ngwa, ngwangwa nkuchi nke ngwa ndị a ejirila nwayọ na enweghị nha. Ntọala a nwere nchegbu na ka njem na -ebili, ndị ụgbọ elu, ndị ọrụ nchekwa na ndị mbata na ọpụpụ na ndị na -ahụ maka njikwa ókèala nwere ike nwee ọtụtụ ule na akwụkwọ ọgwụ mgbochi ịhazi.
"Nanị ụzọ ụlọ ọrụ ahụ ga -esi nwee ike ịga n'ihu n'enweghị nsogbu yana n'ụzọ na -etinye ntụkwasị obi na ndị njem, ndị ọrụ ụlọ ọrụ ụgbọ elu, ndị na -ahụ maka njikwa na ndị ọrụ ahụike bụ ma ọ bụrụ na ndị niile metụtara ya na -agbakọta ọnụ wee bute mmepe na ntinye nke ngwa ndị a ụzọ." ka Capt Conor Nolan kwuru, onye isi oche nke Board of Governors nke Foundation. "Anyị chọrọ ihe ngwọta nke nwere ike itu ọnụ, na -emekọrịta ihe na nke na -ahụ na ozi dị nro ka echekwara."
Ụkpụrụ nchekwa ụgbọ elu bụ otu nọọrọ onwe ya, anaghị akwụ ụgwọ, nzukọ mba ụwa na -eme nyocha, agụmakwụkwọ na nkwukọrịta iji melite nchekwa ụgbọ elu. Ebumnuche nke ntọala ahụ bụ ijikọ, metụta ma duru nchekwa ụgbọ elu ụwa niile.
Njem nlegharị anya n'ụsọ mmiri nke Sorrento na -agbago mgbe oria ojoo gasịrị ...
Denmark kwụsịrị njedebe COVID-19 mgbe ụbọchị 548 gasịrị…
Ọnwụnwa ụlọ ọgwụ ọhụrụ Rheumatoid Arthritis
Slovakia ga-eso Austria n'ime mkpọchi COVID-19 zuru oke
Njikọ Chicken New Texas na-eme ka ọ buru ibu na Cambodia
Aha: Ụgbọ elu Nevada ụgbọ elu ọhụrụ dabere na Reno – Tahoe
Northern Pacific Airways ga -efe ụgbọ elu Boeing ọhụrụ ...
Akwụkwọ ịkpọ òkù White Sands Bahamas NCAA laghachiri n'oké osimiri ...
Chọpụta ụbọchị Rolli na -atọ ụtọ na Cultural Genoa
Kọmitii njem nlegharị anya nke Africa “Otu Afrịka” nwere ugbu a ...
Ụlọ ọrụ njem na-ezute ọzọ na WTM London
Princess Margriet nke Netherlands kpọrọ nne nne ...
Njem mbata mba ofesi weghachite nzọụkwụ dị oke mkpa na...
Lee igwe mmadụ: Trump bụ 'taekwondo...
Nkwado gọọmentị dị mkpa maka ụgbọ elu carbon ọhụrụ ...
Nchọpụta Jupiter ọhụrụ sitere na NASA Juno Probe
Ụlọ ọrụ nri nri na-arị elu na ijeri
Mmadụ abụọ nwụrụ, mmadụ abụọ merụrụ ahụ na Arizona Amtrak ...
Consulate French nke New York na-ewepụta mmanya Val de…
Ụgbọ elu Doha na Almaty na Qatar Airways ugbu a
Ụgbọ elu: Nke kacha mma na nke kacha njọ
Ikike na ọrụ nke nwatakịrị nọ n'ogige
Ebe 10 freelancer kacha elu n'ụwa
Ọgbaghara COVID-19 na-eme ihe ike gbasaa site na Guadeloupe ruo…
IATA weputara asambodo batrị lithium ọhụrụ
Nkịta na-esi ísì COVID-19 na-abịa n'ọdụ ụgbọ elu Miami
Onye minista njem nlegharị anya Jamaica na-ekwu okwu ugbu a na Anchor…
Asọmpi Ire ahịa Ebe Virtual: University...
India na -ekepụta ụgbọ elu Drone dị irè iji mee ka ...
Minista Bartlett na-aga na UNWTO General…
Ụgbọ ala kọmpat egwuregwu adịchaghị ọhụrụ
United ụgbọ elu na -eme atụmatụ nnukwu nhazi ụlọ kemgbe…
Ndị Briten kwuru na gburugburu ebe obibi na nkwado dị mkpa...
WTTC: Njem azụmahịa ga-eru ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke tupu…
Njem nlegharị anya Jamaica na Grupo Pinero: njem nlegharị anya pụrụiche...
FAA setịpụrụ mpaghara enweghị efe n'elu àkwà mmiri Texas jupụtara na ya ...
Ọ dịghị dike hapụrụ na ụbọchị njem nlegharị anya nke ụwa a 2021
Kia Niro ọhụrụ na-eme mpụta mbụ n'ụwa
Ndị njem China dị njikere ma na -atụkwa ụjọ ife ọzọ
Jamaica na -akwado ụgbọ elu 50+ ọhụrụ kwa izu n'etiti Canada ...
Ala ọmajiji 7.5 na Northern Peru
Ihe ịtụnanya Tanzania Novelist nwetara ihe nrite Nobel maka…
Akara linja na-enyere ụmụ nwanyị aka nyocha maka ara...
Ndị otu Lufthansa kwupụtara onye isi ọhụụ Air Dolomiti
Ala ọma jijiji siri ike ka edekọtara n'agwaetiti nke ...
Akuko ikpe COVID-19 izizi na Tonga
Guinea achụọla ndị otu Afrịka maka mwakpo ndị agha
Mgbe Ị gara ihi ụra dị mkpa karịa ogologo oge ị na-ehi ụra December 2, 2021
Ndị ọrụ nyocha na ZOE, ụlọ ọrụ sayensị ahụike, yana otu mba ụwa nke ndị ọkà mmụta sayensị na-ehi ụra na metabolism a ma ama sitere na UK, US, […]
Ụbọchị ọhụrụ a na UNWTO bụ nnukwu nzọụkwụ maka njem, njem nlegharị anya na akụ na ụba ụwa December 2, 2021
Taa, ọdịnihu nke World Tourism Organisation (UNWTO) na-ele anya nke ukwuu. Zurab Pololikashvili si Georgia ka emeghachiri ya dị ka odeakwụkwọ ukwu na ntuli aka nzuzo nke onye ọ bụla agaghị enwe ike ịjụ ajụjụ. Nke a bụ mmeri/mmeri maka ọtụtụ ndị. Nke a bụ ihe kpatara ya.
Genital Psoriasis: Nsonaazụ nke ọmụmụ ọhụrụ December 2, 2021
Amgen taa kwuputara nsonaazụ dị elu site na nnwale DISCREET, usoro nke 3, multicenter, randomized, placebo-controlled, ọmụmụ ihe abụọ kpuru iji chọpụta ịdị irè nke Otezla® (apremilast) na ndị okenye nwere psoriasis genital na-agafeghị oke ma na-agafe agafe. nnukwu plaque psoriasis.
Dochie ụgbọ elu Fighter Canada na ndị ọhụrụ December 2, 2021
Dị ka akụkụ nke amụma nchekwa ya, "Srong, Secure, Engeded," Gọọmenti Canada na-enweta ụgbọ elu 88 dị elu maka ụgbọ elu Royal Canadian Air Force (RCAF) site na usoro asọmpi nke ga-eme ka ihe ndị RCAF chọrọ na-ezute mgbe ị na-ahụ n'aka. uru kacha mma maka ndị Canada.
Ndị na-arịa ọrịa ara ara nwere ike ịzenarị chemotherapy ugbu a December 2, 2021
N'ime ọmụmụ ihe ahụ, ụmụ nwanyị postmenopausal nwere 1 ruo 3 nti nodes na Recurrence Score® results of 0 ka 25 egosighi uru ọ bụla site na chemotherapy mgbe etiti afọ ise gasịrị, nke pụtara na ha nwere ike izere mmetụta ọjọọ nke ọgwụgwọ ahụ.
Njupụta Ọkpụkpụ: Ngwaọrụ Nleba Ọhụrụ December 2, 2021
"Ọ na-awụ ndị mmadụ akpata oyi n'ahụ ịmata na ọkpụkpụ ọkpụkpụ bụ nanị otu akụkụ nke inwe ọkpụkpụ siri ike dị mma. N'ezie, ọtụtụ ndị ọrịa na-enwe mgbagwoju anya n'ihi ọkpụkpụ na-esighị ike adịghị enwe ọkpụkpụ ọkpụkpụ osteoporotic," ka Dr. Paul Hansma, UC Santa kwuru. Barbara Prọfesọ nke Fiziks bụ onye chepụtara teknụzụ dị n'azụ Score Score™.
Ụgbọ elu Avianca na-ahụ ụbọchị ọhụrụ: Nzọụkwụ na-apụ na enweghị ego December 2, 2021
Avianca Airline abụrụla ọkọlọtọ nke Colombia na-ebu ọkọlọtọ kemgbe Disemba 5, 1919. Taa, ụgbọ elu ahụ si n'Isi nke 11 pụọ n'ọnọdụ enweghị ego.
Omicron: iyi egwu ọhụrụ ma ọ bụ ọ nweghị ihe dị mkpa? December 2, 2021
Omicron - ụdị kachasị ọhụrụ nke kparịrị ahịa ma kpata mmachibido njem site na ụfọdụ mba ndịda Africa - nwere ike mebie mgbake ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na atụmatụ na-aga n'ihu iji mesie amụma nnwale, dị ka na US.
Ndị ọkachamara na-egosi Athens ụzọ ọhụrụ iji mee azụmahịa December 2, 2021
Obodo Athens na International Association of Professional Congress Organizers (IAPCO) na-esonyere ike site na mmekọ ebe ọhụrụ emechara n'oge IBTM World 2021.
Germany na-enweta ụtọ Seychelles ugbu a na mmemme anụ ahụ mbụ December 2, 2021
Ka ọnwa lekwasịrị anya na mmemme mebere na webinars, njem nlegharị anya Seychelles kwadoro emume anụ ahụ mbụ ha na Germany, kemgbe mmalite ọrịa a, na Nọvemba 18, 2021.
Jamaica: Ọmụmụ ihe gbasara Ọzụzụ Ọhụrụ Pụrụ Iche December 2, 2021
Minista njem nlegharị anya Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, ekpughere na American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI), onye mmekọ dị mkpa nke Jamaica Center of Tourism Innovation (JCTI), ekwenyela ibipụta ihe ọmụmụ nkuzi pụrụ iche na-elekwasị anya na Jamaica. Emere mkpebi a n'ihi na, kemgbe mmekọ ahụ malitere afọ anọ gara aga, ihe karịrị ndị ọrụ njem nlegharị anya Jamaica 8,000 enwetala asambodo ọkachamara.
Ebe ntụrụndụ akpụkpọ ụkwụ ugbu a na-agba ọsọ ụbọchị 40 nke inye onyinye maka ezumike December 1, 2021
Sandals Resorts, akara ngosi ụlọ ezumike nke Caribbean na-eduga okomoko niile, na-aga n'ihu na-eme mmemme ncheta afọ 40 ya na “afọ 40 nke onyinye ịhụnanya.”
Seychelles abụghị obodo nchegbu ugbu a maka Australia karịa Omicron Variant December 1, 2021
Ewepụla Seychelles na ndepụta mba anabataghị ịbanye Australia n'ihi nchegbu banyere Omicron, ụdị COVID-19 nke achọpụtabeghị na agwaetiti Indian Ocean.
Omicron dị ugbu a na United States: CDC kwadoro December 1, 2021
Onye America gbara ọgwụ mgbochi zuru oke si South Africa bịarutere na ụdị COVID-19 Omicron ọhụrụ, na-ewelite mgbịrịgba mkpu na US niile.
Enweghị mgbanwe na UNWTO: Zurab Pololikashvili kwadoro dị ka odeakwụkwọ ukwu 2022-2025 December 1, 2021
Ndị minista na-ahụ maka njem nlegharị anya na ndị nnọchiteanya na-anọchite anya ihe karịrị mba 130 ghọrọ ndị juri na Madrid taa na-ekpebi ma onye odeakwụkwọ ukwu nke UN Affiliated Agency ugbu a ga-aga n'ihu na-eduzi ya maka afọ 4 na-esote.